DEG DEG: Xiriirka FA oo dacwad hor leh ku soo oogay Jose Mourinho – Gool FM
DEG DEG: Xiriirka FA oo dacwad hor leh ku soo oogay Jose Mourinho
Byare November 1, 2016
(England) 01 Nof 2016. Xiriirka kubbada cagta dalka Ingiriiska ee FA ayaa dacwad hor leh ku soo oogay Jose Mourinho muddo usbuuc gadaheed.
Goor dhow ayay ahayd markii Jose Mourinho lagu soo eedeeyay hadaladii uu ka yiri garsoore Anthony Taylor ka hor kulankii ay Man United la yeelatay Liverpool.
Dacwada labaad uu iminka Mourinho kala kulmayo FA ayaa ah dhaqan xumo uu ku kacay ciyaartii dhawayd ay bar-baraha 0-0 la galeen kooxda Burnley horyaalka Premier League.
Macallinka reer Portugal ayaa lagu soo eedeeyay inuu arayo aflagaado ah ku yiri saraakiisha kulanka mar uu ka sii baxayay kanaalka laga boxo qeybta hore ee ciyaarta.
Wuxuu heystaa ilaa 6pm ee 4-ta bishan November ee ku beegan Jimcaha soo socda si uu jawaab uga soo bixiyo eedeymaha loo soo jeediyay.
Ganaaxyada suuro galka ah ee la filayo inuu la kulmo Jose ayaa ah, Digniin, ganaax lacageed, in laga ganaaxo halka uu garoonka ka soo fariisto oo kuraasta sare loo diro amaba in garoonka dhan laga ganaaxo.
Xiriirka FA ayaa talaabadan qaaday kaddib markii ay eegeen warbixinta kulanka uu garsoorayay garsoore Clattenburg.
53-jirka ayaa soo ifbaxay qeybtii labaad ee ciyaartii Burnley balse wuxuu ka soo muuqday kuraasta sare maadaama garoonka laga saaray ka hor inta aan markale garoonka laga bixin, kolkan waxay ahayd halka ay agaasimayaasha fariistaan.
Sidoo kale Jose Mourinho ayaa diiday inuu la hadlo saxaafadda kulanka kaddib.
Dhaliyihii ugu goolasha badnaa Taariikhda Koobka Adduunka Miroslav Klose oo ka fariistay Ciyaaraha Caalami
Taageerayaasha Manchester United oo qaban qaabinaya Mudaaharaad looga soo horjeedo Mourinho